Otú nyefee Music & listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad ka Computer
> Resource> iTunes> otú nyefee Music & listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ka PC
Part1: Uru nke na-ebufe music ka PC
Part2: Nyefee Music si iPad ka PC aka enweghị ihe ọ bụla software
Part3: Nyefee music si iPad ka PC na TunesGo
Na-kpọmkwem na ruo n'ókè e nwere ọtụtụ iri puku uru nke na-ebufe music na ndị ọzọ na media faịlụ ka PC. Onye ọrụ bụghị nanị na-arụ a odi mfe ọnọdụ na mmekọrita media nchekwa kamakwa ọ bụ nke ihe ize ndụ nke music ọnwụ na ihe ọ bụla ọzọ mishap ruru ka na-ezighị ezi ngwaọrụ. Na nke kacha mma na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ na-adade ke a nkuzi na-abụghị nanị soro nzọụkwụ site nzọụkwụ kamakwa onye ọrụ bụ ike inweta ihe kasị mma uru na nke a. Ụfọdụ n'ime uru ndị na-ebufe music si a obere ngwaọrụ ka a PC ma ọ bụ na laptọọpụ na-kọwara dị ka n'okpuru:
The music na media management-aghọ mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ. Na wuru na ọrụ nke Mac na PC a onye ọrụ bụ ike inweta ihe kasị mma management ụlọ ọrụ na-PC na laptọọpụ site-azọpụta music. Nke a management uru na-agụnye-edegharị ihe music ka otutu ọnọdụ, eke nkwado ndabere na mpaghara na-ebufe ya mpụga media nchekwa dị ka na mgbe achọrọ.
The ohere nchekwa nke PC dị nnọọ ukwuu karịa ihe ọ bụla na-ebugharị ebugharị iDevice. Terabytes nke nchekwa ugbu a na e ẹkenam mgbe ọ na-abịa PC ike draịva na maka otu ihe ahụ ọ bụ nnọọ mkpa iburu n'obi na a ebighị ohere na-enye ohere ọrụ iji nweta ọtụtụ puku song na otu ebe nke mere na a nnukwu collection e wuru. Ọ na-ọ bụghị nanị anọzi music onye ọrụ nwekwara ike ịgbakwunye na-azọpụta ndị ọzọ formats dị ka mp4, 3GP na wma.
N'ihi na a ọhụrụ ọrụ mgbasa ozi na akakabarede bụ ike ọrụ dị ka ngwa ojiji bụghị dị mfe mgbe nile. Iji PC onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na music faịlụ formats na-converted ọzọ n'ime sekọnd. The software omume dị ka Format Factory mere ka ndụ mfe n'ihi na ndị na-ọrụ na-achọ kpọmkwem tọghata music maka iOS ma ọ bụ Android. The ogologo Nkuzi na-abịa, tinyere nwekwara hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a na-enye ha ohere iji software rụọ ọrụ nke ọma.
E nwere ọtụtụ iri puku free ngwaọrụ dị online na ike ga-eji na-eme ka n'aka na data kpọfere kọmputa na-atụle nke mere na onye ọrụ nwere ike gbanwee ma hichapụ ọdịnaya ọ bụrụ na achọrọ. Ọ na-enye ohere ọrụ segriget na songs dị ka ha oge, na-abụ abụ na mkpokọta fim na dị iche iche online n'elu ikpo okwu nyere na akpan akpan ibe.
N'akụkụ ahụ e kwuru n'elu e nwere ọtụtụ narị ndị ọzọ bara uru a na-apụghị chịkọtara na a obere isiokwu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na irè na njikwa nke media dị ka uche na ọchịchọ na-dị ka a nrọ-emezu n'ihi na a PC ọrụ na onye na-ebufe ka usoro mgbasa ozi PC ma ọ bụ Mac-eje ozi nzube ọma niile dị otú ahụ akụkụ. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma uru nke na-n'aka na music a gbanwere na ahụ zigara azụ ka ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla nke ma mgbe ọ na-abịa ngwaọrụ ahụ na ọ bụ nnọọ ike ubi ma ọ bụ bee na-achọghị music akụkụ na mgbe ahụ na-azọpụta ya dị ka ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị tech savvy mgbe ọ na-abịa iOS ma ọ bụ ọbụna android.
Ọ bụ mfe niile Filiks na a onye ọrụ nwere ike ịmụta iji jide n'aka na ihe kasị mma na-eme na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ attains nsonaazụ ọ na-gwara na-eso nkuzi nzọụkwụ site nzọụkwụ nke mere na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke na nke a. Na-esonụ bụ nzọụkwụ na onye ọrụ kwesịrị ịgbaso ime needful:
m. The iPhone ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iDevice bụ ike jikọọ PC na mbụ eriri USB na-ebute usoro:
ii. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na iExplorer na ulo oru na PC ma ọ bụ Mac bụla a na-eji:
III. Si ebe a onye ọrụ kwesịrị na-agagharị na Music> mkpa playlist a ga-agafere iji jide n'aka na usoro na-aga n'ihu were were:
too ogologo. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa CTRL isi na pịa niile songs ma ọ bụ listi ọkpụkpọ ndị a ga-kpọfere PC. Ozugbo nhọrọ kemgbe ahụ ụzọ Nyefee> nyefee dum playlist ka nchekwa bụ na-ahọrọ:
v. Na-esote window na Pop elu onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na lekwasịrị nchekwa na-ahọrọ na na PC ebe playlist ma ọ bụ song bụ na-agafere. N'ihi na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ọ ga-abụ Music nchekwa ma na Mac na PC. Nke a na-completes usoro na zuru ka achọrọ e mere na nke a:
Part 3.Transfer music si iPad ka PC na TunesGo
Wondershare Mara maka na-emepe emepe software mmemme na-ala nke nkà na maka otu ihe ahụ ya ugbu a na-ewepụta TunesGo nke bụ otu n'ime ndị kasị mma software iji jide n'aka na music bụghị nanị ndabere kamakwa anọgide nchebe. Iji nweta nsonaazụ kacha mma onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na nke a:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata software si URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ na nwere soro ntuziaka ka jide n'aka na software arụnyere. Ozugbo mere na ọ bụ-oru nke mere na isi interface-egosi:
ii. The iDevice site na nke data a ga-agafere bụ na-mmasị ka PC na enyemaka nke eriri USB:
III. The software ga-eme ka n'aka na media na dị na ngwaọrụ achọpụtara na egosipụta:
too ogologo. The song a ga-kwagara PC na-ahọrọ na exported ka PC dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru iji jide n'aka na usoro completes: